ပြည်သူ့ဘုန်းဘုန်း: July 2008
ထကြလော့ ရွှေမြန်မာတွေ အလင်းရောင်သန်းနေပြီ
မျက်စေ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ သင့်ရှေ့ကနေရောင်ခြည်ဟာ ရင်ညွန့်ထဲကို ထိုးကျလာလိမ့်မယ်။ သင်တို့ဟာ စစ် အတွင်းက ကွဲကွာနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပဲ။ သင်တို့ရဲ့အားတွေ အရမ်းလိုအပ်နေပြီ။ တစ်ယောက်တည်းလုပ်လို့ မရတဲ့ အရာထဲမှာ နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ အရေးကြီးဆုံးအချက်လည်းပါတယ်။ သင်တို့ရဲ့ လက်တွေသန်မာကြလော့။ သင် တို့ရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ သေနေလို့ မဖြစ်တော့ဘူး။ သင်တို့ရဲ့ နာကျည်မှုတွေဟာ ဘယ်ချိန်ထိဆက်လက် မျိုသိပ်နေကြဦးမှာလဲ။ ဘ၀တွေသေနေကြပြီ။ လူသားတစ်ယောက် ရပိုင်ခွင့်အခွင့်ရေးတွေ ဆုံးရှုံးနစ်နာနေကြတာ ဘယ်ချိန်ရှိပြီလဲ။ နှစ်ပေါင်းများစွာ သေနေတဲ့ ဘ၀တွေကို ဆွဲထုတ်လိုက်ကြတော့။ သင်တို့ဟာ လူသားမျိုးနွယ်စု တစ်ခုလုံးကို ကိုးစားပြုတယ်ဆိုရင် သင်တို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်တွေနဲ့ ဒီလက်တစ်ဆုပ်စာ စစ်အာဏာရှင်တစ်စုကို တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ဖို့ ရဲရင့်ကြလော့။ ထကြလော့။ အိပ်နေလို့မဖြစ်တော့ဘူး။
ဇင်ဘာဘွေဟာ မကြာခင် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသစ်ကြီးကို ထူထောင်နိုင်တော့မယ်။ ဆူဒန်သမ္မတဟာလည်း သူ့ရဲ့ပြုမူလုပ်ဆောင်
ချက်တွေကို ပေးဆပ်ရတော့မယ်။ ဒါကြောင့် ဆူဒန်ဟာလည်း ယုတ်မာတဲ့ ခေါင်းဆောင်လက်ထဲ ကနေ ရုန်းထွက်နိုင်ရင်း ခေတ်မှီဖွင့်ဖြိုးတဲ့ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်ကြီးကို မကြာခင်တည်ထောင်နိုင်တော့မယ်။
သူတို့ဟာ အလင်းရောင်တွေ သန်းနေပြီ။ ဒါကြောင့် အာဏာရှင်အစိုးရဆိုတာ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ရွံ့မုန်းနေကြ တယ်။ ရွှေမြန်မာတွေ ရောင်ခြည်သန်းနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီကို မကြာခင်ရရှိတော့မယ်။ ဒီတော့ တစ်ယောက်တည်းနဲ့ တော့ မဖြစ်ဘူး။ အားလုံးတက်ညီလက်ညီ လက်တွဲဖို့လိုတယ်။ အတ္တကိုရှေ့တန်းတင်ပြီး ငါ့အကျိုးအတွက် လောက်နဲ့တော့ အလကားရရှိတဲ့ အချိန်တိုလေးတွေကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချတတ်ဖို့ မလုပ်ဘဲ ထင်ရာစိုင်းတဲ့ဝါဒကို စွန့်လွှတ်လိုက်တော့။လုပ်နိုင်တဲ့
ဘက်က လုပ်ပါ။ မလုပ်ဘဲနဲ့ မနေပါနဲ့။ ယူဂျီလုပ်နိုင်ရင်လုပ်ပါ။ အိုဂျီအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်အောင် ထပ်မံကြိုးစားဖို့ လမ်းစကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အန်ဒါဂရောင်းကနေ အိုဗာဂရောင်းကို ကူပြောင်းတဲ့အခါမှာ မိမိလုပ်ထားတဲ့ အန်ဒါဂရောင်းလုပ်ရှားမှု ဆဲလ်တွေများနေရင် အိုဗာရောက်ရင် အသုံးဝင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျုပ်တို့ဟာ တရားမျှတမှုကို ရှေ့တန်းတင်ရမှာဖြစ်ပြီး၊ တရားမျှတတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို အသုံးချပြီး တိုက်ပွဲ ၀င်ကြမယ်။ သင်တို့ဟာ အမိမြေကိုချစ်တယ်။ ဆင်းရဲတွင်းနက်နေတဲ့ ပြည်သူလူထုကို မကြည့်ရက်ဘူး ဆိုရုံနဲ့ တော့ အရာမထင်ပါဘူး။ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ဖန်းတီးလုပ်ဆောင်ဖို့ အရမ်းကိုအရေးကြီး နေပါပြီ။
လူမှုရေး၊စီးပွားရေး၊ပညာရေးစတဲ့ အရေးမှန်သမျှ ချွတ်ခြုံကျနေတဲ့ အမိမြေဟာ ဆာလောင်သံတွေနဲ့ ဟစ် အော် နေကြရင်း မွမ်းကျပ်နေခဲ့တယ်။ အသိဥာဏ်မဲ့တဲ့ လူတွေရဲ့လုပ်ရပ်တွေကြောင့် ပြည်သူတွေလည်း ထောင် ပေါင်း
များစွာ အသက်ပေးခဲ့ရပြီးပြီ။ လက်ရှိအချိန်ထိ ဆင်းရဲတွင်းနစ်နေတဲ့ ကူညီမဲ့ရင်း ဆာလောင်နေတဲ့ ဧရာဝတီ သားတွေကုို ကြည့်ကြပါ။ တကယ်တန်းကြည့်တတ်ရင် မြင်မှာပါ။ ထောင်ပေါင်းများစွာကို စစ်အစိုးရက သတ်လိုက် တာပါ။
နာဂစ်ကိုပဲ မြင်နေကြတဲ့ လူတွေကို စစ်အစိုးရရဲ့ သတ်လိုက်ပုံအကြောင်းကို ရှင်းပြတာဟာလည်း ယူဂျီ လုပ်ရှား မူဘဲပေါ့။ စဉ်းစားကြည့်ပါ တကယ်တန်းဆိုရင် နာဂစ်ဟာ တစ်သောင်းထက်ပိုသေသင့်တဲ့ ကိစ္စရပ်မဟုတ်ပါဘူး။ အခုသိန်းနဲ့ချီပြီ သေကျေရတယ်ဆိုတာ ဘာကြောင့်လဲ။ န.အ.ဖ ရဲ့ညံ့ဖျင်းတဲ့ လုပ်ရပ်။ လူမဆန်တဲ့ အမြင် အသေ တွေကြောင့်ပေါ့။ လွတ်ရာကျွတ်ရာကို ပြေးဖို့ကြိုတင်သတိပေးနိုင်ပါလျှက် မလုပ်ဆောင်ခြင်းစတာတွေအ တွက် ကြောင့် အခုလိုသေကျေပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။ အမိန့်နဲ့ နှစ်ရက်လောက်ကြိုတင်သိနေတဲ့ ဒီမုန်တိုင်းဘေးကို လွတ်မြောက်စေရန် ထုတ်ဆောင်နိုင်ရမယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါမျိုးတွေမလုပ်ဆောင်ခဲ့ဘူး။ နောက်တစ်ခုက လူသားမဆန် တဲ့ လူတွေလုပ်ရပ်ကို ထပ်မံလုပ်လိုက်ပြန်တယ်။ ဒါကဘာလည်းဆိုတော့ ပြည်ပက အကူအညီတွေကို ငြင်းဆန်ခဲ့ တဲ့လုပ်ရပ်ပေါ့။
အမှန်တကယ် အကူအညီတွေ ချက်ခြင်းရပါလျှက် ငြင်းဆန်ခဲ့တာကြောင့် အစာရေစာ ပြတ်လပ်ပြီး လူတွေ မသေ သင့်ဘဲ သေခဲ့ရပြန်တယ်။ ဆိုလိုတာက ဒါမျိုးတွေကို ပြည်သူလူထုသိအောင် အန်ဒါဂရောင်းလှုပ်ရှား မှုဖြစ်တဲ့ စာရွတ်စာတမ်းဖြန့်တာမျိုး၊ကိုယ်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ အ၀န်းဝိုင်းမှာ အသိပညာပေးတဲ့အနေနဲ့ စုဝေးပြီးဟော ပြောတာမျိုးစတာတွေကို လုပ်ကြဖို့ပါ။ ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့တော့ မနေကြပါနဲ့။ သင်တို့သင်ယူနေတဲ့ ပညာရပ်တွေဟာ ကိုယ့်အကျိုးအတွက်ပဲလား။ ပြည်သူလူထုကို ကိုယ်စားမပြုရင်တော့ ပြည်သူလူထုက သင်တို့ရဲ့အသိပညာဆိုတာ တွေကို အသိအမှတ် မပြုဘူးဆိုတာ သိစေချင်တယ်။ မဝေးတော့တဲ့ အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ ကျုပ်တို့အားလုံး
လက်တွဲညီညီနဲ့ ဒီစစ်အာဏာရှင် လက်တစ်ဆုပ်စာလေးကို ဖြုတ်ချနိုင်အောင် စွမ်းဆောင်ကြရလိမ့်မယ်။
ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံ။ ကမ္ဘာ့ ခေါင်းဆောင်မှု့ယုတ်မာဆုံးနိုင်ငံ။ ကမ္ဘာ့လာဘ်စားမှု အများဆုံးနိုင်ငံ။ စတဲ့ စာရင်း တွေက ဆွဲနုတ်နိုင်အောင်ဆိုရင်တော့ သင်တို့အားလုံး လက်ပိုက်ကြည့်နေရုံနဲ့ ပပျောက်မှာ မဟုတ်ဘူးဆို တာ ဘဲ။ လူတွေဟာ လူနဲ့မတူတော့ဘူး။ အရမ်းကို ဖိနှိပ်ခံနေရတယ်။ ဒါဟာ ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်း ယုတ်မာပက် စက်မှုကိုပြန်လည်ခံစား
နေကြရခြင်းဖြစ်တယ်။ ကိုလိုနီခေတ် ပြန်ရောက်ရင်တောင် ဒီလောက်ယုတ်မာ ပက်စက် ရိုင်းစိုင်း ခံရလိမ့်မယ်မထင်ဘူး။ လူပေါင်းများစွာရဲ့သွေးတွေ အခုချိန်ထိ လမ်းပေါ်တွေမှာ မခမ်းခြောက်သေးဘူး။ မကြာခင်အချိန်မှာဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုမှမေ့မဖျောက်နိုင်သေးတဲ့ စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင်လှုပ်ရှားမှု သံဃာတော် များစွာရဲ့ သွေးများဘုရား
ခြေရင်းတွေမှာ ဖြာကျခဲ့ရတဲ့ အရှင်လတ်လတ် သတ်ဖြတ်မှု တစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်။ ဒါ တွေဟာ မေ့ဖျောက်လို့ မရတဲ့ န.အ.ဖရဲ့ လူသားမဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေဘဲ မဟုတ်လား။
ကျုပ်တို့အားလုံး ထကြဖို့လိုပြီ။ န.အ.ဖ ရဲ့ ညံ့ဖျင်းတဲ့ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးကို တွန်းလှန်နိုင်ဖို့လိုပြီ။ ဆက်လက် အိပ်စက်နေဦး
မယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့ဟာ တရားဝင်အစိုးရပုံစံမျိုး ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး ဆက်လက်အတုယောက်အုပ် ချုပ်မှုနဲ့ ကျုပ်တို့ရဲ့ အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်များ အကြောက်တရားရဲ့ ဖိနှိပ်မှုအောက် ပြားပြားမှောက်ရင်း အလူး အလဲခံစားရရင် စစ်ဖိနပ်အောက်မှာပဲ ဘ၀တွေပြားပိနေကြရဦးမယ်။ ဒီတော့ တတ်နိုင်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ရင်း ကိုယ့်စွမ်းကိုယ်စတွေကို အသုံးချတတ်ဖို့လိုနေပြီ။
သင်ဟာ နိုင်ငံကိုချစ်တယ်ဆိုရင်တော့။ သင်ဟာ နိုင်ငံနဲ့လူမျိုး ဂုဏ်ကိုမြှင့်တင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့။ သင်ဟာအပြစ်မဲ့
ပြည်သူများစွာကို ဆင်းရဲတွင်းဆက်လက် မထားချင်ဘူးဆိုရင်တော့၊။သင်ဟာ ဆာလောင်သံများကို တစာစာအော်နေတဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့ အသံတွေမကြား ချင်ဘူးဆိုရင်တော့။ သင်ဟာ ကမ္ဘာ့အလည်မှာ အထီး ကျန်နေတဲ့ နိုင်ငံကြီးကို မားမား
မတ်မတ် ရပ်တည်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ သင်ဒီအတိုင်းနေလို့ မဖြစ်တော့ဘူး။ အိပ်နေလို့ မဖြစ်တော့ဘူး။ သင်ဟာကိုယ်
ကျိုးအတွက်ပဲ ကြည့် နေလို့၊လုပ်နေလို့ မဖြစ်တော့ဘူး။
ဒီအစိုးရဆ်ိုတာ သိတယ်မဟုတ်လား ။ မကောင်းတဲ့ အပြုအမူဆိုရင်တော့ ဗြောင်ကျကျ လိမ်ရမလား။ လက်ရဲ ဇက်ရဲ သတ်ဖြတ်လိုက်ရမလား။ သူ့တို့ အာဏာတည်မြဲမယ်ဆိုရင်တော့ ဘုရားခေါင်းဖြတ်သင့်ရင်ဖြတ်မှာပဲ။သံဃာ ခေါင်း ဖြတ်ခိုင်းဖြတ်မှာဘဲ။ ဘာမှစဉ်းစားနေမဲ့ ကောင်တွေမဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ ဒီလိုအကြောက်တရားတွေနဲ့ ဖိနှိပ် မှု၊ချုပ်ခြယ်မှုတွေနဲ့ ဆက်လက်သွားနေမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါကိုလည်း ဆက်လက်လက်ခံနေမယ်၊ ကြောက်နေဦးမယ်
ဆိုရင်တော့ အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးဟာ အမှောင်တွေနဲ့ ဆက်လက်မည်းနေဦးမှာပဲ။
ဒီအချိန်ဟာ ကမ္ဘာက မြန်မာကို တော်တော်ဂရုစိုက်နေပြီ။ အလင်းရောင်လေးတွေ သန်းလာနေပြီ။ ကျုပ်တို့ အားလုံး ဒီအလင်းတန်းလေး တွေကို မကွယ်ပျောက်သွားစေရန် ဆက်လက်ညှိထွန်းရင်း တိုက်ပွဲဝင်နေဖို့လိုတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ အကြောက် တရားအောက် ဆက်လက်ကြောက်နေရင်း အိပ်ပျော်နေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ ရင်းလေး စရာ ဖြစ်နေလိမ့်ဦးမယ်။
ဒီစစ်အာဏာရှင် လက်အောက် ပြည်သူတွေ
ဖိနှိပ်မှုမျိုးစုံနဲ့ ဒုက္ခအတွင်း သက်ဆင်းနေကြရပေါ့
၀ဋ်ကျွေးဆိုတာ ရှိရင် ကျေပါစေတော့ဘုရား။
လမ်းဘေးမှာ သူတောင်းစားမျိုးစုံ၊ ဈေးသည်မျိုးစုံ၊ ၀န်းထမ်ပေါင်းများစွာ။ ကျောင်းသူ ကျောင်းသူတွေများစွာ၊ ရ ဟန်းသံဃာတော်များ ပြည်သူလူထု လူတန်းပေါင်းစုံများစွာရဲ့ အသံတွေဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဆာလောင်နေကြ တယ်။ ဆင်းရဲတွင်းက တက်လာချင်ကြပြီ။ လူမဆန်တဲ့ ကောင်တွေရဲ့ လက်ထဲကနေ လွတ်မြောက်ချင်ကြပြီ။ လူ ဆန်တဲ့ အပြုအမှု၊ အတွေးခေါ်တွေနဲ့ ဆက်လက်ချီတက်နေချင်ကြပြီ။ သင်တို့အားလုံး ကျုပ်တို့အားလုံးဟါ ဒါတွေကို ကြားရောင်ပါ။ တွန်းလှန်တော့ပါ။
ဆက်လက်ငြိမ်နေဦးမယ်ဆ်ိုရင်တော့ ပြည်သူလူထု အစာမကြေတိုင်း ထထအော်ရင်း အသက်တွေဆက်လက် စတေးနေကြရဦးမယ်။ အမှန်တရားဆိုတာ ဘယ်တော့မှ ကွယ်ပျောက် သွားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ အမှန်တရား က အရှုံးပေးသွားရတယ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှရှိလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အမှန်တရားကို ဆက်လက် ကိုင်စွဲပါ။ အမှန်တရားကြောင့် အသက်စတေးလိုက်ရခြင်းဟာ မြင့်မြတ်ပါတယ်။ အနာဂတ်ကလည်း သမိုင်းမှာ အဲဒီလူတွေကို ဘယ်တော့မှ မေ့ဖျောက်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အမှတ်တရားကို ချစ် မြတ်နိုးသူတိုင်း အမှန်တရား က ပြန်လည်စောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်။
ဓမ္မနိယာမ-အရ လွတ်လပ်မှုကို ချုပ်ခြယ်သူမှန်သမျှကို လွတ်လပ်မှုက သူတို့ကိုပြန်လည် ချုပ်ခြယ်ခံရပါလိမ့် မယ်၊ လွတ်လပ်မှုကြောင့် ရရှိခံစားရမဲ့ အခွင့်ရေးတွေကို သူတို့ပြန်လည် ပေးဆပ်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် အမှန်တ ရားဆိုတဲ့ ဓမ္မက ရှုံးနိမ့်သွားတဲ့ ကိစ္စဆိုတာ မရှိပါဘူး။ တစ်နေ့တော့ လုံးဝအနိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီဘ၀မရရင် နောက် ဘ၀မှာ ပြန်လည်အနိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဖြစ်သင့်တာ လုပ်ရမှာကတော့ အိပ်မနေကြပါနဲ့တော့ ထကြပါတော့ ရွှေ ရောင်မျှော်လင့်ချက် ရောင်ခြည်တွေသန်းနေပါပြီ။
မျှော်မှန်းချက် သက်သက်သာ မဖြစ်စေဘဲ
မဝေးတော့ပါဘူး။ အိပ်မနေကြပါနဲ့တော့၊ ထကြလော ရွှေမြန်မာတွေ။ ဒီမိုကရေစီ
ရဲရင့်ကြပါ၊စိတ်ကူးရင် သက်သက်တော့ မဖြစ်စေပါနဲ့
မနက်ဖန်မှာ စစ်အစိုးရဟာ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးရဲ့
နာကျင်မှု အရောင်တွေပြန်လည် ခံစားရတော့မယ်
သင်တို့ရဲရင့်ကြရင်း သင်တို့အတွေးအခေါ်တွေ မသေကြပါနဲ့
၃၀၊ ၀၇၊ ၂၀၀၈
Posted by Ashin dhamma at 5:29 PM0comments
၀န်ကြီးဦးအောင်သောင်းသည် ၂၀၀၇ ခုနှစ် အရေးအခင်းများတွင် ဆန္ဒပြပြည်သူများကို ရိုက်နှက်ဖို့ကိစ္စ နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်သူအာဏာပိုင်များထဲမှာ တဦးအပါအ၀င်ဖြစ်သည်ဟု စက်မှု (၁) ၀န်ကြီးဌာန အရာရှိများ၏ စွပ်စွဲခြင်းခံရသူဖြစ်သည်။ ဆွေမျိုးသားချင်း ကောင်းစား ရေးဝါဒ လက်ကိုင်ထားသည့် ၀န်ကြီးဦးအောင်သောင်းသည် အခြေခံဥပဒေ ဆန္ဒခံယူပွဲ၌ ၄င်း၏ဇာတိ တောင်သာမြို့နယ် ကျောက်ကာကျေးရွာမှ (၆၂) ရာနှုန်းသာ ထောက်ခံမဲရသည်
Posted by Ashin dhamma at 7:51 AM 1 comments
လာမည့် သြဂုတ်လ ၇ ရက်နေ့တွင် ကိုဇာဂနာ၊ ကိုဇော်သက်ထွေးတို့အား ဒုတိယအကြိမ် ရုံးထုတ်မည်ဟုလည်း စုံစမ်း သိရှိရသည်။ [Top]
Posted by Ashin dhamma at 7:31 AM0comments
ငလျင်လှုပ်စဉ်က ရုံးမှာ အလုပ်လုပ်နေတုန်းမို့ ပထမအကြိမ် ခပ်ဖြေးဖြေးလှုပ်တုန်းက ရယ်တောင်ရယ်မိသေးတယ်။ “ငလျင်လှုပ်တယ်ဟ" ပေါ့လေ။ သိပ်မကြာဘူး။ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလဲ လှုပ်ရော တရုံးလုံး အပြင်ကို ပြေးထွက်ကြပါလေရော။ ရုံးအတွင်းပိုင်းမှာ ရှိနေတဲ့သူတွေကျတော့လဲ စားပွဲအောက်ထဲ ပြေးဝင်ကြတယ်။ ကိုယ်သာ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘဲ၊ အခန်းထဲက မထွက် ကုလားထိုင်မှာ ထိုင်ရက် ခေါင်းကိုသာ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ အုပ်ထားမိတယ်။ ရုတ်တရက်ဆိုတော့ လုပ်မိလုပ်ရာပေါ့လေ။ အပေါ်က မျက်နှာကြက်တွေ ပြိုကျမှာ ကြောက်တာကိုး။
နောက်တော့ ကြောက်လန့်ပြီး အပြင်ထွက်လေရာ အနွေးထည်အထူကြီးဝတ်ပြီးထွက်ရော။ ဒီလောက်ခံရတာတောင် မိုးလေ၀သသတင်းကို ကြည့်ရကောင်းမှန်း မသိသေးဘူး။ အကျင့်မှ မပါသေးတာ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလိုနေ့ကျမှ "ဆန်းနီး" တဲ့။ တိမ်တွေကလဲ တောက်လို့။ နေကလဲ ကြဲကြဲတောက်။ ချွေးတဒီးဒီးကျ လို့ ကိုယ့်အကျီ င်္ အထူကြီး ဆုတ်ဖဲ့ပစ်ချင်တာ။ ခံပေါ့။ သတင်းမှ မယုံဘဲလေ။
အခု ဒီအိမ်မှာ သတင်းစာလဲ မမှာဘူး။ လာမပို့နဲ့ဘဲ။ ဘာတွေ လာပြောနေလ၊ဲ "ဒို့မယုံဘူး" ပဲ။
Posted by Ashin dhamma at 5:44 PM0comments
yannaing - UploadaDocument to Scribd
Read this document on Scribd: yannaing
Posted by Ashin dhamma at 5:47 AM0comments
ကိုကိုကြီး၊ ၈၈ မျိူးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်နှင့်အင်တာဗျူး မှတ်တမ်း (ဒီဇင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၆)
(သူ့အကြောင်း မှတ်မိသမျှ - ကိုကိုကြီးက ဗကသ ဒုဥက္ကဌအဖြစ် သြဂုတ်လ ၂၈၊ ၁၉၈၈ မှာ စတင် တာဝန်ယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ မင်းကိုနိုင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးနောက် ကိုကိုကြီးက ဗကသကို ဆက်လက်တာဝန်ယူပါတယ်။
ထိုအချိန်က ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရေး မ၀င်ရေး သဘောထားများ ကျောင်းသား၊ လူငယ်များအကြား ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေကြချိန်မှာ ကိုကိုကြီးရဲ့ စာတမ်း - “ ၃ ချောင်း ထောက်” စာတမ်းက လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အတိအကျကို ပြန်ရေးပါဦးမယ်။
Posted by Ashin dhamma at 11:35 PM0comments
ဖြိုးကြီး။ ဇူလိုင် ၂၉၊ ၂၀၀၈
Posted by Ashin dhamma at 5:16 PM0comments
Posted by Ashin dhamma at 6:50 AM0comments
Posted by Ashin dhamma at 6:21 PM0comments
Posted by Ashin dhamma at 6:30 PM0comments
လက်ချိုးရေတွက်၍ ရနိုင်သည့် အမျိုးသမီး တချို့သာ မြန်မာနိုင်ငံ ပြင်ပ အတိုက်အခံ လှုပ်ရှားမှုအတွင်း ထူးထူးခြားခြား အသိအမှတ်ပြုခံကြရသည်။ သို့သော် … လှုပ်ရှားမှုကြီး တခုလုံးနှင့်ယှဉ်လျင်မူ လိင်အရ အမှန်တကယ် တန်းတူညီမျှမှု ရှိ မရှိ ဆိုသည်မှာ မသေချာလှပေ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၆၃ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့၌ ချီတက်ဆန္ဒပြနေသည့် ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားသူ မြန်မာအမျိုးသမီးတဦး (ဓာတ်ပုံ - အေအက်ဖ်ပီ)
၀ိုင်အိုလဲ့ချို နှင့် အေးလဲ့တို့ ရေးသားသည့် Women in the Movement ကို ဆီလျော်အောင် ပြန်ဆိုဖော်ပြပါသည်။
Posted by Ashin dhamma at 6:23 AM0comments
Posted by Ashin dhamma at 12:07 AM0comments
ဒေါက်တာဓမ္မာနန္ဒ(K.sri Dhammananda)ကလဲ “ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ လူမှုရေးအမှန် တရား ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ လုံးဝဆက်နွယ်မှု မရှိဘူး၊ ပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိဘူး”လို့ အထက်ပါ ဓမ္မပဒ စကားက မဆိုလိုကြောင်း မိန့်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာ ဥပဒေတွေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ၊ စီးပွားရေးစီမံကိန်းတွေနဲ့ ပုံဖော်ထားရတာ ဖြစ်လို့ပါပဲ။ အဲဒီမှာ အရေးအကြီး ဆုံးက နိုင်ငံရေးစီမံကိန်းပါပဲ။ နိုင်ငံရေးစီမံကိန်းမကောင်းရင် ဘ၀လွတ်မြောက်ကြောင်း နိဗ္ဗာန်အတွက် မဆိုထားနဲ့ လောကီချမ်းသာကိုတောင် ရရှိဖို့ မလွယ်ပါဘူး။
ဇူလိုင် ၂၅၊ ၂၀၀၈
အခုက ဘလောက်ခေတ် ဖြစ်တော့သကိုးလို့ ကြွေးကြော်ရမလို ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ သူသူငါငါ ကိုကို မမ မြန်မာတို့ ဟိုမှာလည်း ဘလောက်၊ ဒီမှာလည်း ဘလောက် ဖြစ်နေကြချိန်၊ ယခင်က ၀င်းအင်းဝတို့၊ ၀င်းဘားမိစ်တို့နဲ့ ရိုက်ခဲ့တဲ့ စာတွေကို ယခုအင်တာနက်ပေါ်မှာ ခေတ်စားတဲ့ ဘီအိုင်တီ၊ ပုရပိုက်၊ အမ်မြန်မာ နဲ့ ဇော်ဂျီ (ခေတ်အစားဆုံး ဖောင့်) အဖြစ် လောကဓာတ်နည်းသုံးပြီး ပြောင်းနိုင်ဖို့ ပရိဂရမ်တခု ထွက်လာပါပြီ။ မြန်မာအိုင်အက်စ်ပီက ဝေမျှထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ထုတ်လုပ်သူတွေကတော့ ကနောင်မင်းသားကြီး အမည်နဲ့ နည်းပညာအဖွဲ့ကလို့ ဆိုပါတယ်။
အခုလည်း ဘလောက်ဂါများ၊ အင်တာနက် တခေတ်ဆန်းချိန် မြန်မာစာရိုက်သူများ ၀မ်းမြောက်ဖွယ် မြန်မာဖောင့်အဟောင်းများကို မြန်မာဖောင့်အသစ်သို့ ပြန်ရိုက်စရာ မလိုဘဲ စက်က ပြောင်းပေးမယ့် လောကဓာတ်ပညာ ပေါ်ထွက်လာပါပြီ။ ကူးယူ ဖြန့်ဝေကြပါကုန်။
(ဖောင့် ပြောင်းစက်ကို ဒီမှာ သွားယူပါ။ မိုးမခက စာရိုက်ရတဲ့ လူတွေကတော့ ထ က နေမှာ မြင်ယောင်သေးတော့)
ဒီနေရာတွေကို မှတ်ထားပါဦး။ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောရအောင် - http://myanmarisp.com/Font , http://www.zawgyi.net , http://code.google.com/p/kanaung/
Posted by Ashin dhamma at 3:06 AM0comments
ဆိုင်ကလုံးအကူအညီများ ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း ကုလသမဂ္ဂပြောကြား
ဇူလိုင် ၂၆၊ ၂၀၀၈
စစ်အစိုးရ၏ငွေလဲလှယ်မှု စည်းမျဉ်းများကြောင့် မုန်တိုင်းဒဏ် ကူညီရေး အလှူငွေ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းမက ဆုံးရှုံးနေရသည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ အရာရှိတဦးက ယနေ့ပြောကြားလိုက်သည်။
ယင်းသို့ပြောလိုက်သူမှာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာရေးလုပ်ငန်းများ ညှိနှိုင်းရေးမှူး ဒန်ဘိတ်ကာ ဖြစ်သည်။
မုန်တိုင်းဒဏ်ကူညီရေးအတွက် လှူဒါန်းသူများမှာ စိတ်အားထက်သန်မှု လျော့နည်းလာကြောင်း၊ အလှူငွေများ ဆုံးရှုံး ပျောက်ဆုံးသည့်အတွက် ၎င်းအလှူရှင်များ စိတ်ပျက်သွားနိုင်ကြောင်းကို ဒန်ဘိတ်ကာက စိုးရိမ်သည်ဟု ဆိုသည်။
“ဒါ တကယ်ကြီးမားတဲ့ ပြဿနာပဲ၊ အင်မတန် စိုးရိမ်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျာ” ဟု ဆိုသည်။ “ဒီလောက်ရာခိုင်နှုန်း ဆုံးရှုံးမယ်ဆိုရင် အလှူရှင်တွေက ကျုပ်တို့ကို ပိုက်ဆံပေးတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီပြဿနာကို ကျုပ်တို့ ဒီအတိုင်း လွတ်ထားလို့မရဘူး” ဟု ပြောပြသည်။
မုန်တိုင်းအကူငွေများကို မြန်မာပြည်တွင် နိုင်ငံခြားငွေလက်မှတ် (FEC)အဖြစ် ဦးစွာ လဲလှယ်ရပြီး မြန်မာကျပ်ငွေသို့ ထပ်မံ လဲလှယ်ရသည်။ ဈေးကွက်တွင် ထို FEC လက်မှတ်များမှာ ဒေါ်လာပေါက်ဈေးထက် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း လျော့နည်းသည်။
၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် FEC လက်မှတ်စနစ်ကို စစ်အစိုးရက ဖန်တီးခဲ့သည်။ ငွေကြေး မှောင်ခိုဈေးကွက်အား တိုက်ဖျက်ရန် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း မှောင်ခိုဈေးကွက်မှာ ရှင်သန်ဆဲဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တရားဝင်ငွေလဲနှုန်းမှာ ၁ ဒေါ်လာ ၆ ကျပ်ခန့်သာရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကုလသမဂ္ဂက မြန်မာအာဏာပိုင်တို့နှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ဖြစ်ကြောင်း၊ FEC လက်မှတ်စနစ်ဖျက်သိမ်းပေးရေးအတွက် တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်း ဘိတ်ကာက ပြောပြသည်။ ကုလသမဂ္ဂက အလှူရှင်တိုင်းပြည်များကို မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်မြန်မာပြည်ကူညီရေးအတွက် ဒေါ်လာ သန်း ၂၉၀ လှူဒါန်းရန် ဖိအားပေးလျက်ရှိသည်။
Posted by Ashin dhamma at 2:50 AM0comments
ရွှေဝါရောင်ကို ကူညီခဲ့သူ မြန်မာမွတ်စလင် ကျောင်းသားများ ရဲဘက်စခန်းပို့
Posted by Ashin dhamma at 6:29 PM0comments
Posted by Ashin dhamma at 5:45 PM0comments
Posted by Ashin dhamma at 7:00 AM0comments
Posted by Ashin dhamma at 6:58 AM0comments
သတင်းထောက် အိမ့်ခိုင်ဦးကို ရုံးထုတ်စစ်ဆေး
ကြာသပတေးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 24 2008 18:15 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ နာဂစ်လေဘေး ဒုက္ခသည်အရေး လိုက်လံ သတင်းယူသဖြင့် အဖမ်းခံခဲ့ရသော Ecovision ဂျာနယ် သတင်းထောက် မအိမ့်ခိုင်ဦးအား တာမွေတရားရုံး၌ ယနေ့ ရုံးထုတ် စစ်ဆေးလိုက်သည်။
ရန်ကုန်တိုင်း တာမွေမြို့နယ် တရားရုံးတွင် တရားစွဲခံထားရသူ အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် မအိမ့်ခိုင်ဦးအား တာမွေမြို့နယ် ရဲစခန်းမှ တရားလိုသက်သေ ဒု-ရဲအုပ် ဇော်မင်းညွန့် မပါရှိသော်လည်း သက်သေ ၁၈ ဦးဖြင့် ယနေ့တွင် ရုံးထုတ်၍ စတင် စစ်ဆေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“အခု ရုံးချိန်မှာ တရားလို သက်သေ မလာဘူး။ သူတို့ကို ဖမ်းဆီးစဉ်က သက်သေရဲတွေ ရှိတယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒီဟာကို စစ်လိုက်တာပဲ။ တဖက်ရှေ့နေလည်း ရှိတယ်။ သူတို့ ၁၈ ဦးထဲမှာပါတဲ့ တပ်ကြပ်ကြီး မြင့်ဦးဆိုတာ (တာမွေ ရဲစခန်းက) သူက ရှိနေတဲ့အတွက် သူ့ကို ဒီနေ့ စစစ်ဖြစ်တယ်” ဟု မအိမ့်ခိုင်ဦး အမှုတွဲတွင် ပါဝင်သည့် ကိုကျော်ကျော်သန့်၏ ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ရှိန်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
တပ်ကြပ်ကြီး မြင့်ဦးသည် အခင်း ဖြစ်ပွားသည့်နေ့က ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (ယူအန်ဒီပီ) ရုံးရှေ့တွင် တာဝန်ကျခဲ့ပြီး အထက်က ဖမ်းမိန့်ပေးသဖြင့် သူတို့ကို ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း သက်သေ ထွက်ဆိုခဲ့သည်။
ပြစ်မှုထင်ရှားလျှင် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်အထိနှင့် ငွေဒဏ်ပါ ကျခံရနိုင်သည့် လူထုကို ဆူပူစေရန် လှုံ့ဆော်မှု ပုဒ်မ ၅ဝ၅ (ခ) ဖြင့် မအိမ့်ခိုင်ဦးအား တရားစွဲဆိုထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ယနေ့ ရုံးထုတ်ရာတွင် သူမ၏ မိသားစုဝင်များလည်း တက်ရောက် နားထောင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အမှုကိုမူ ယခုလ ၃၁ ရက်နေ့သို့ ပြန်လည် ချိန်းဆိုလိုက်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လ ၁ဝ ရက်နေ့တွင် တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ လေဘေးဒုက္ခသည် ၃ဝ ခန့်က ရန်ကုန်ရှိ နိုင်ငံတကာမှ အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့ (အန်ဂျီအို) များထံ သွားရောက်၍ အကူအညီ တောင်းခံရာတွင် မအိမ့်ခိုင်ဦးက သတင်းလိုက်ယူရင်း တာမွေမြို့နယ် နတ်မောက်လမ်းရှိ ယူအန်ဒီပီ ရုံးရှေ့တွင် ကိုကျော်ကျော်သန့်နှင့်အတူ အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။
ယခုလ ၂ ရက်နေ့က အမှုရက်ချိန်း စတင်ရှိခဲ့သော်လည်း သူတို့နှစ်ဦး၏ ရှေ့နေများက အမှုကို ထပ်မံ လေ့လာလိုသဖြင့် ယနေ့သို့ ပြောင်းရွှေ့ ချိန်းဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မအိမ့်ခိုင်ဦးသည် အဖမ်းမခံရခင်က ရန်ကုန်အခြေစိုက် အပတ်စဉ်ထုတ် Ecovision ဂျာနယ်တွင် သတင်းထောက်အလုပ်ကို လုပ်ခဲ့သည်မှာ ၂ လခန့်သာ ရှိသေးသည်။
Ecovision ဂျာနယ်ကို ၂ဝဝ၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် စတင်ထုတ်ဝေကာ ယခင်က စီးပွားရေး ကဏ္ဍကိုသာ ဦးစားပေး ဖော်ပြခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်မူ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအပြင် ကျန်းမာရေးကဏ္ဍနှင့် ဆောင်းပါးများကိုပါ ထည့်သွင်း ထုတ်ဝေလာခဲ့သည်။
Posted by Ashin dhamma at 5:17 PM0comments
ငါတို့ကိုယ်ငါတို့ ရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်ဖို့ ….
အဲဒီ အတွေးအခေါ်ကို သင်းသတ်ထားခဲ့တယ်။
အပြန်အလှန် ပူးပေါင်းတယ် ….
အတူတကွ လုပ်ကိုင်တယ် ….
ငါတို့ကို အိပ်ရေးပျက်စေမယ့် ….
(ဒါပေမယ့် ငါတို့က အိပ်နေတာမဟုတ်ဘူး)
ငါတို့ရဲ့ နား မျက်စေ့ ဦးဏှောက်တွေကို အချိန်ပြည့်ဖွင့်ထားခဲ့ကြ။
ဘယ်သူတွေ ဘာပြောတယ်ဆိုတာ ကြားဖို့ ….
ဘယ်သူတွေ ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာ မြင်ဖို့ ….
ဘယ်သူတွေ ဘာတွေးတယ်ဆိုတာ ဆင်ခြင်ဖို့ ….
ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့မှ အရာမရောက်တဲ့ ….
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလောင်မြိုက်သေမယ့် မီးကျီးခဲကို မြေမြှုပ်သင်္ဂြိုလ်ထားခဲ့တယ်။
(ဒါပေမယ့် ငါတို့က မြေကြီးပေါ်မှာ ထိကပ်နေအောင်ရပ်တယ်)
ဒုစရိုက်ဆယ်ပါးနဲ့ ဝေးနိုင်သမျှ ဝေးဝေး ….
မေတ္တာတရားနဲ့ နီးနိုင်သမျှ နီးနီး ….
အကုသိုလ်နဲ့ ဝေးနိုင်သမျှ ဝေးဝေး ….
သုဂတိနဲ့ နီးနိုင်သမျှ နီးနီး ….
Posted by Ashin dhamma at 5:01 PM0comments
အလှူပစ္စည်းများသယ်ယူရန် ငွေကြေးကောက်ခံ၊ ရပ်ကွက်လူထုက မကျေမနပ်ဖြစ်နေ
ဖြိုးကြီး။ ဇူလိုင် ၂၄၊ ၂၀၀၈
လေဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် ပေးဝေမည့်ပစ္စည်းများသယ်ယူရန်အတွက် ရပ်ကွက်လူကြီးများ က ပြည်သူများထံငွေကြေးကောက်ခံမှုများပြုလုပ်၍ လူငယ်များအား လုပ်အားပေးခေါ်ခိုင်းပြီး ပစ္စည်းများဝေခြမ်းရာတွင် မညီမျှမှုကြောင့် မကျေမနပ်ဖြစ်နေကြသည်။
ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဘိုကလေးမြို့ မြို့သစ်ရပ်ကွက်(၂၃)၊ (၂၄) ရာအိမ်မှူးများက ပြည်သူများထံမှ ယခုလ(၁၉) ရက်နေ့၌ တအိမ်လျှင် ငွေ(၅၀၀)ကျပ် ကောက်ယူကာလူငယ်များအား ပစ္စည်း သယ်ရာတွင် အလုပ်ခိုင်းစေခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးက “ကျမအိမ်ကို ငွေလာကောက်တာက ဆယ်အိမ်မှူးဦးပေစိဆိုတဲ့ သူကလာကောက်တာ၊ ဘာပစ္စည်းတွေ သယ်မယ်ဆိုတာလည်း မပြောဘူး၊ လုပ်အားပေးခေါ် တယ်ဆိုတာက အကုန်မဟုတ်ဘူး၊ ကျမတို့ ရာအိမ်ပိုင်ထဲက လူငယ် (၈) ယောက်လောက်ဘဲ ခေါ်တာ” ဟု ပြောသည်။
ပစ္စည်းများပေးဝေရာတွင် လမ်းကော်မတီများက မျှတမှုမရှိသည့်အတွက် (၂၄) ရာအိမ်အပိုင်မှ လူထုက မကျေမနပ်ဖြစ်ကာ တပ်မ (၆၆) လက်အောက်ခံကွပ်ကဲရေးရုံးသို့ သွားရောက်တိုင်ခဲ့ ကြောင်း ဒေသခံအမျိုးသမီးက ဆက်လက်ပြောသည်။
“သူတို့ကဝေတာတော့ (၂၃) ရာအိမ်ပိုင်က မဲပေါက်လို့ဆိုပြီး ကျမတို့ကိုတော့ မပေးတော့ဘူးလို့ ပြောတယ်၊ ငွေလဲပေးရ၊ လုပ်အားပေးလဲလိုက်ရပြီး မရတော့ ကျမတို့က (၁၉) ရက်နေ့ညမှာ ဘိုကလေးမြို့က ကွပ်ကဲရေးရုံးမှာ လူ (၂၀၀) လောက်က သွားပြီးတင်ပြတာ၊ အဲရောက်တော့ ဗျူဟာမှူးက မင်းတို့ထဲက ပြောတတ်ဆိုတတ်တဲ့သူ (၅) ယောက်လာခဲ့လို့ခေါ်ပြီး ကျန်တဲ့သူတွေ ကို ပြန်ခိုင်းလိုက်တာ” ဟုပြောသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ငွေကြေးကောက်ခံမှုများနှင့် ပြည်သူများအား ပစ္စည်းများဝေခြမ်းရာတွင် မျှတမှုမရှိ သည်များကို ဖြေရှင်းရန် (၂၀) ရက်နေ့ နံနက်တွင် မြို့နယ်မယက ဥက္ကဌဦးစိုးသိန်းက ရပ်ကွက် အတွင်းတွင်သာ ပြန်လည်ဖြေရှင်းရန် ညွှန်ကြားလိုက်ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
မြို့သစ်ရပ်ကွက်ရယကတာဝန်ရှိသူတဦးက အဆိုပါအဖြစ်ပျက်များနှင့် ပတ်သက်၍ မိမိ ကိုယ်တိုင်မသိရှိကြောင်းနှင့် မင်္ဂလာမြန်မာလူမှုအထောက်ကူပြုအဖွဲ့မှ လူဒါန်းသည်ကို လမ်းကော်မတီများနှင့် ဝေခြမ်းရေးအဖွဲ့များက လုပ်ဆောင်ခြင်းသာဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
“ပိုက်ဆံကောက်တယ်ဆိုတာက ပစ္စည်းသယ်ကြတဲ့အဖွဲ့တွေက ရာအိမ်နှစ်ပိုင်ကိုငွေကောက် လိုက်တယ်၊ လမ်းကော်မတီတွေက လမ်းအလိုက်ကောက်တာ၊ ကျနော်တို့ဆီမှာက လမ်း အလိုက် ကော်မတီလေးတွေဖွဲ့ထားတာပါ၊ ကျနော်လည်း မသိလိုက်ပါဘူး၊ အဲဒီအချိန်မှာ အစည်းအဝေးသွားတက်နေတာ” ဟုပြောသည်။
ထို့အပြင် ကောက်ခံထားသည့် ငွေကြေးများကိုလည်း ရာအိမ်မှူးများကိုခေါ်ယူကာ ညတွင်းချင်း ပြန်လည်ပေးခိုင်းလိုက်ကာ ပစ္စည်းများကိုလည်း အညီအမျှခွဲဝေပေးလိုက်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
“ကျနော်က ကောက်ထားတဲ့ငွေတွေအမြန်ဆုံးပြန်ပေးရင်ကောင်းမယ်လို့ ကွပ်ကဲရေးရုံးမှာ တင်ပြလိုက်ပြီး အဲဒီညနေဘဲ သူတို့ချက်ချင်း ပြန်လိုက်ပေးလိုက်ကြပါတယ်၊ အားလုံးငွေလက်ခံ ရရှိကြောင်း လက်မှတ်တွေလည်း သူတို့ထိုးပေးထားပါတယ်၊ လမ်းကော်မတီတွေကို ကျနော် ခေါ်ပြီး ကောက်တဲ့သူသွားပြန်ပေးခိုင်းလိုက်တာပါ” ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ မင်္ဂလာမြန်မာ လူမှုအထောက်ကူပြုအဖွဲ့မှ လူဒါန်းသည့် ပစ္စည်းများကို မြို့သစ်ရပ်ကွက် အတွက် ဆန် (၁၂၅) အိတ်၊ ဆီ (၆၂) ပုံး၊ ဆား (၅) အိတ်နှင့် ပဲအိတ် (၂၅) အိတ်ရရှိပြီး ရပ်ကွက်အတွင်း အိမ်ထောင်စု (၈၇၂) စုအား ယမန်နေ့တွင် အညီအမျှပေးလိုက်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
“ကျနော်အားလုံးကို ဆန် (၃) ပြည်ခွဲ၊ဆီ (၈၀) ကျပ်သား၊ ပဲ (၁) ပိဿာ (၂၀) သား၊ ဆားက အိတ်တ၀က်ပေးဝေလိုက်ပါတယ်၊ မနေ့က အားလုံးပြီးပြတ်သွားပါပြီ၊ ကျနော်က ကျေနပ်မှုမရှိ ရင် ကျနော်ကိုပြောပါဆိုတော့ ကျေနပ်ပါတယ်၊ ငွေ ၅၀၀ ပြန်ရလားဆိုတော့ ရတယ်လို့ပြောပါ တယ်” ဟုပြောဆိုခဲ့သည်။
Posted by Ashin dhamma at 7:09 AM0comments